Dawlada Jabouti Oo Markii Ugu Horeysay Ka Hadashay Saamaynta Ay Dekeda Berbera Ku Yeelan Karto Dekeda Jabouti .
Saturday June 03, 2017 - 19:22:00 in Wararka by Halgan News
Hargeysa(Halgan)Dawlada dalkaasi Jabouti ayaa markii ugu horeysay ka hadashay saamaynta ay dekeda Berbera iyo balaadhinteedu ku yeelan karto dekeda Jabouti.
Guddoomiyaha maamulka dekedaha dalkaasi Jabouti Abubakar Cumar Xadi ayaa waraysi uu siiyey wargeyska Capital ee kazoo baxa dalkaasi Ethiopia kaga hadlay saamaynta iyo walaaca ay ka qabaan isticmaalka dekeda Berbera ee dalkaasi Ethiopia uu isticmaalaayo.
Waxaanu wargeyskaasi ugu horeyn weydiiyey saamaynta dekeda Jabouti kala kulmi karto maalgelinta lagu samaynaayo dekeda Berbera iyo isticmaalka dekeda ee dawlada Ethiopia waxa uu ku jawaabay "Kama warwarayno, sababtoo ah Itoobiya xajmigeedu si dhaqso ah ayuu u korayaa sannad kasta.” ayuu yidhi madaxa dekedaha ee Djibouti, isagoo intaas raaciyay, "Haddii uu jiro tartan xor iyo xalaal ahi, markaas maalgashi badan ayaanu samaynaynaa shirkadaha Itoobiyana waxay barbar dhigi karaan damacooda meelaha kale.”
Tan iyo intii shirkadda DP World ay la wareegtay dekeda magaalada Berbera waxa dawlada Jabouti ahayd mid cabsi weyni kazoo wajahday tartanka ay la geli doonto dekeda magaalada Berbera oo ku taala marin muhiim ah .
Waxaanay tani sii balaadhatay markii ay dawlada Ethiopia heshay saami dhan 19% kamid ah maalgashiga dekeda lagu samaynaayo, taas oo keenaysa inay kordhiso dawlada Ethiopia isticmaalkeeda dekeda magaalada Berbera.
Waxa kale oo iyaduna falaadh ku noqotay dawlada Jabouti saldhiga ciidan ee dawlada Emirate ku ka samaysanayso magaalada Berbera, kaas oo laftiisu ka soo jiidan kara wadamada saldhigyada ku leh dalkaasi oo usoo wareegi kara dhinaca magaalada Berbera, madaama oo ay tahay meel aad u muhiim ah.